> Resource > Video > Webvideo Author: Beddelaan video in hoorto Flash video
Wondershare WebVideo Author users u saamaxaaya in ay badalo videos in hoorto Flash videos. Si fudud u dajiyaan clips ah, iyo si fudud u dhoofiyaan sida filimada flash (Jabbuuti), ama Flash Video (FLV). Waa aragti ah dhisidda webcast ah, abuurista bandhigyo video for web daabacaadda, iyo horumarinta waxyaabaha la baranayo muuqaal ah.
Marka hore, download, rakibi oo ay maamulaan app this, ka dibna dajiyaan aad videos iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah saddex dariiqo oo hoos ku qoran.
Mid ka mid ah waa in guji "File"> "Add Files" doorasho ama riix badhanka xitaa aad videos maxalliga ah iyo kuwa iyaga soo dhoofsadaan kuwa aad doonayay. Ama jiidi oo hoos u faylasha aad rabto in aad si loogu badalo in barnaamijkan.
2 Dooro Jabbuuti ama FLV sida qaab wax soo saarka
Jabbuuti iyo FLV u kala weyn loo internetka. Websites More iyo ka badan oo caan ah labada isticmaasho qaabab video ay. Sidaas daraadeed waxaad u badalo kartaa video inay qaabab ay u geliyaan in ay website.
Si aad u dooratid FLV sida qaab wax soo saarka, kaliya furo liiska "profile" hoos-hoos, oo markaas waa inay "Video" category. FLV waxaa halkan ka mid ahaa. Haddii aad rabto in aad doorato Jabbuuti, u tag "Web"> "Jabbuuti".
Author WebVideo Tani waa doorashada ugu fiican ee aad u. Sababta oo ah waxa uu bixiyaa badan oo muuqaalada video tafatirka qabow. Ka hor inta uploading inay internet, kaliya sameeyo qaar ka mid ah shaqooyinka loo baahan yahay tafatirka si aad video jiidasho. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku milmaan files badan galay mid ka mid file, si Gadzhiyev file ah, si aad uga jarto mid file galay qaybaha kala duwan, si ay u jar dhererka file ah, si video dalagga, si ay ula qabsadaan video saamayn, si xaalkaa labada text ama watermark image, in aad ku darto Cinwaan iyo wixii la mid ah.
4 Beddelaan video in hoorto flash videos
In geeska hoose ee midigta ah interface ugu weyn, guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta video. Ka dib markii ay diinta ka ay ka badan tahay, riix "Folder Open 'si aad u ogaato faylasha la gediyay. Hadda, waxaad gali kartaa faylasha wax soo saarka si ay u websites aad rabto inaad la wadaagto. Waa qabow, soo maaha?
Features Key ee Wondershare WebVideo Author
Beddelaan videos in hoorto Flash videos sida FLV
Beddelaan videos in FLV, Jabbuuti oo u web daabacaadda.
Upload content kasta video in website si fudud oo dhaqso.
Goo cidhifyada madow ka video by lana siii feature.
Jar ka videos ku daray in dhererka ama size kasta.
Shakhsiyeeyo aad videos ay ku daray qaar ka mid ah saamaynta farshaxanka iyo watermark.
Midowdo dhowr video files galay mid ka mid file.